Tignoolajiyada Basaasida Dunida - Robot Le'eg Dukhsi | Saxafi
Maxaa ku cusub Tignoolajiyada Basaasida Dunida? Baadhayaasha arrimaha war-doonka iyo badbaadinta dadka ku dhibaataysan meelaha xaaladoodu adag tahay, ama sida lagu gaadhaa aanay sahlayn ee dalka Maraykanka ayaa ku guulastay inay sameeyeen, aalad (Robot), dukhsiga leek oo cod iyo sawirba duubi karta, taas oo aan waxba laga garan marka sheeda laga eego dukhsiga.
Kooxaha baadhayaasha ah ee aaladan (Robot)-ka ah ku guulaystay oo dhawaan wargeyska (Science) ee dalka Maraykanka ka soo baxa, ku soo bandhigay ayaa sheegay in aaladan aadka u yar oo dhinac walba ka le’eg Dukhsiga aadna ugu egi u duul duul badan tahay sida Dukhsiga oo kale.
Waxa ay tilmaameen in qalabka laga sameeyay dhamaantii yahay walxo (Carbon) Kaarboon ah, isla markaana leeyahay qaybo sida muruqyada ama jidhka oo kale ah oo ka samaysan, aalado elegtaroonig ah.
Dukhsigan sahaminta iyo war doon-nimada loo samayeeyay ee aalada ah ayaa la sheegay in halkii daqiiqo uu samayn karo, duul duul dhan boqol iyo labaatan jeer taas oo ah inta dukhsigu duul duulka sameeyo sida ay khabiiradaasi ku andacoodeen.
Aaladan oo inteeda badan ay horumarin ku sameeyeen baadhayaal ka tirsan jaamacada (Harvard University) ee dalka Maraykanka, waxa ay noqonaysaa ama lagu tilmaamay aaladii (Robot)-kii ugu xajmiga yaraa ee abid lagu guulaysto marka laga eegayo waxyaabaha baadhitaanada iyo war-doonka loo samaysto.
Aaladan sida dukhsiga oo kale u samaysan ayaa awood u yeelan karta in dadka warkooda lagu daba taagan yahay si dhibyar, guryaha iyo meelaha ay ku nool yihiin loo soo dhex galiyo, ka dibna warkooda oo dhan halkaas laga heli karo ama si fudud loo ogaan karo waxa ay wadaan.
Waxa kale oo ay khabiirada sameeyay sheegeen in looga faa’iidaysan karo, la dagaalanka xasharaadka dhibaateeya, beeraha iyo dalaga oo lagu dhex darsan karo ka dibna iyada oo la daawanayo uu geli karo godadka iyo meelaha ay isku qariyaan cayayaanku ee aan lagaga daba gali karin.
Khabiirada ayaa imika qiyaasaya sida ay aaladan ugu rakibi lahaayeen, cod aad ugu dhow ka dukhsiga oo kale, si aanu dukhsigu uga baqan oo uga firdhan hareeraheeda, waxa ay hore ugu guulaysteen in baalasheedu u shaqeeyaan qaab la mid ah kuwa dukhsiga oo kale.
Previous articleAroos Wadareed Saami Qaybsiga Qoomiyadaha Hindiya Lagu Saleeyay
Next articleNew Alliances In The Future Of The Horn Of Africa